EPL: Man United oo guul ka soo gaartay Burnley oo ay booqatay, xilli Martial iyo Rooney ay shabaqa soo taabteen….+ SAWIRRO – Gool FM
(Burnley) 23 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul muhiim u ahayd ka soo gaartay naadiga Burnley oo ay booqatay kulan ka tirsan Premier League, waxaana ay uga soo badisay 2-0.
Goolka hore ee Man United ayaa waxaa u dhaliyey 21’daqiiqo Anthony Martial, kaddib markii kubbad uu ka soo jiiday goolka kooxdiisa uu u dhiibtay Ander Herrera, isla markaana uu dibadda u soo dhigay baas hagaagsan sidaasna shabaqa ugu taabtay, Man United ayaana kulanka ku hoggaamisay 1-0.
Markale kooxda Manchester United ayaa la timid goolka labaad ee ciyaarta, waxaana kubbad uu sifiican difaacyada Burnley kubadda uga farsamaystay Pogba uu baas wacan u dhigay Anthony Martial, kaasoo isku dayey inuu kubadda dhaliyo, laakiin goolhayaha ayey ku dhacday, waxaana qaatay oo dhaliyey 39’daqiiqo kabtan Wayne Rooney oo kulankan ku soo bilowday ciyaarta ayaana sidaasi loogu kala nastay Burnley oo lagu hoggaaminayey 2-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay natiijada ciyaarta waxba iskama bedelin, inkastoo la isku helay fursado goolal loo filan karay haddana ciyaarta ayaa ku soo dhammaaday waqtigii loogu tala galay 2-0 ay ku badiyeen wiilasha Jose Mourinho.
Kooxda Manchester United ayaa hadda fadhisa kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxaana ay leedahay 63-dhibcood, kaddib 32 kulan oo ay dheeshay.
Arsenal oo iska xaadirisay final-ka FA Cup kaddib markii ay garoonka Wembley guul soo laabasho ah kaga gaartay kooxda Man City… + SAWIRRO